धावनमार्ग चर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थल अवरूद्ध
22 May 2019 | बुधबार, ८ जेष्ठ, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
मंगलबार, २ असोज, २०७५
काठमाडौँ । धावनमार्ग ‘रनवे’ मा सामान्य धाँजा परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केहीबेरका लागि उडान अवतरण अवरुद्ध भएको छ ।
रनवे अवरुद्ध हुँदा अवतरणमा रहेका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान १० मिनेटदेखि आकाशमै ‘होल्ड’ भएका छन् ।
रनवे सामान्य चर्किएपछि मर्मतका लागि विमान केही समयका लागि होल्डमा बस्नुपरेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । अबको केही समयपछि नै उडान अवतरण सामान्य हुने उनले बताए ।
खासगरी वर्षायाममा विमानस्थलको कोटेश्वरतर्फको रनवेमा पटक–पटक समस्या आउने गरेको छ ।
Tribhuwan International Airport
के तपाईलाई राज योगबारे थाहा छ ?
एजेन्सी । जन्मको समय र तारिखको आधारमा कुण्डली हेरेर होस या हस्तरेखा हेरेर होस व्यक्तिको वर्तमान र भविष्य ज्योतिष विद्या मार्फत जान्ने प्रचलन छ । जसमा विभिन्न शास्त्र मार्फत व्यक्तिको बारेमा बुझ्न सकिन
यी महिलाहरुले हात धुन समेत पानीको प्रयोग गर्न पाँउदैनन्
एजेन्सी । दुनिँयामा कैयौ यस्ता आदिवासी क्षेत्रहरु छन् जँहा रहेका मानिहरुको परम्परा पनि अनौठो हुन्छ ।
बिहिबार जन्मेका व्यक्तिकाे गुण कस्ताे !
बिहिबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र निकै समझदार हुने गर्दछन् । यस्ता मानिसहरुलले अरुलाई निकै इज्जत गर्छन् । त्यसकारण मानिसहरुका लागि आदर्श पनि बन्ने गर्छन् ।
हिन्दु धर्म अनुसार यस्ता छन् बिहिबार गर्नै नहुने कामहरु
हिन्दु धर्मका अनुसार हरेक दिनको आफ्ना आफ्नै महत्व रहेको छ । तर, विशेष त विहीबार अति नै महत्वपुर्ण रहेको बताइन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यसको सम्बन्ध बृहस्पति ग्रहसँग रहेको छ ।
थाहा पाउनुहोस् दालचिनीको सेवन कस्ता मानिसहरुले गर्नुहुँदैन
माछा खाएपछि किन दूध पिउन हुन्न ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । जन्मको समय र तारिखको आधारमा कुण्डली हेरेर होस या हस्तरेखा हेरेर होस व्यक्तिको वर्तमान र भविष्य ज्योतिष विद्या मार्फत जान्ने प्रचलन छ । जसमा विभिन्न शास्त्र मार्फत व्यक्तिको बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।
सेतो सर्प !